Ukuzimela kweemoto zombane kunyuke ngaphezulu kweepesenti ezingama-50 kwiminyaka emi-6 | Iindaba zeGajethi
Njengoko isihloko sale ndaba sisitsho Ukuzimela kweemoto zombane kunyuke ngaphezulu kweepesenti ezingama-50 kwiminyaka emi-6, kwaye nangona kuyinyani ukuba kubonakala ngathi lixesha elide ukufezekisa ukwanda kweepesenti ezingama-50 kuluhlu lweemoto, yinto ebalulekileyo yolwazi kolu shishino.
Inyani yile yokuba ukulawula ukwandisa amanani okuzimela ngeebhetri zangoku yinto enzima ukuyenza kushishino lweemoto. Kungenxa yesi sizathu kanye le nto kufuneka sivuyisane kwaye Qhubeka nokuphanda izinto ezikhoyo kule minyaka imbalwa izayo ukwandisa ukuzimela kwizithuthi zombane.
Okona kunyuka kwe-km kumalunga nama-65. Le datha ibonelelwa liSebe lezaMandla laseMelika kwaye yongeza iipesenti ezingama-56 zokuzimela kwiimoto ukusukela ngo-2011 ukuya kuthi ga namhlanje. Phakathi kwazo, ukuzimela okumangalisayo njengaleyo yeemodeli ze Eyona Tesla inamandla kakhulu efezekisayo, ngokomenzi wayo, ubuninzi beekhilomitha ezingama-540 ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo okanye eyona ilula yokujikeleza isixeko njenge-Smart ForTwo, i-100% yombane efezekisa uluhlu lwe-100 km.
Amaphepha kunye nemithombo yeendaba ekhethekileyo enje ELECTrek Bayalumkisa ukuba nangona kuyinyani ukuba ukwanda kokuzimela kwezi moto kulungile xa kubalwa ixesha kude kube namhlanje, konke oku kuya kuphucula kakhulu kule minyaka ili-2-4 izayo kuvusa inzala ngakumbi kubasebenzisi yokuthenga ezi moto, ezakuthi incede i uphando kunye nophuhliso ukuphucula ubomi bebhetri. Kuthiwa oku kuzimela okuphakathi ngoku (i-183 km) kunokuphindaphindwa kwiminyaka elishumi ezayo ukuya kuma-320 km ngokomndilili kuzo zonke iimodeli.
Kufuneka sicace gca ukuba zininzi izinto ezichaphazela ukuzimela kwezi moto kwaye kusengqiqweni ukuthi isantya esisezantsi, kokukhona ukuzimela kukhulu, kokukhona kungcono iarodynamics, ngcono ukuzimela, ukuthoba ubunzima, ngcono ukuzimela kwaye ngenxa yoko isandla ezimbalwa zezinye izinto. Kodwa into ebalulekileyo kuyo yonke le nto yile Zonke iinkcukacha ziyaqhubeka nokuphuculwa nokucokiswa eziphembelela oku kunyuka kokuzimela kwiimoto zombane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ukuzimela kweemoto zombane kunyuke ngaphezulu kweepesenti ezingama-50 kwiminyaka emi-6
Sihlalutya i-ergonomic mouse yeTrust Vergo nge-SORTEO